Abavelisi beemveliso kunye noMzi mveliso
Senza uphuhliso lweelastomer kunye nokuvelisa sisebenzisana namaziko emfundo kunye nezenzululwazi eYurophu kwizisombululo eziphambili. Umxokelelwano wokubonelela ngabavelisi bentsimbi ngokuduma okuhle kuzwelonke nakwamanye amazwe kuvumela i-DeepFast ukuba izise iimoto ezizinzileyo kwimarike. Ukhetho ngononophelo lwamaxabiso ezinto ezizodwa kwiimoto ze-DeepFast zibonelela ngokusebenza okufunekayo.
Amanqanaba amabini kunye nezixhobo ezimbini zokomba izixhobo
Amanqanaba amabini kunye nezixhobo zokomba eziSantya-mbini zinokuzisebenzisa ngokupheleleyo izibonelelo zobuchwephesha be-PDC yokuphula amatye ngokufanelekileyo kwaye ziphucule ngakumbi izinga lokugrumba koomatshini ngendlela esezantsi yokuvumela.
I-Matrix Body PDC Drill Bit ilungele ukwakheka kobunzima obuphakathi kunye nobunzima kunye neprofayili yesithsaba kunye nolwakhiwo lwabasiki. Inokufezekisa ukusebenza okungcono kwizithuba ezinzulu. Ubomi benkonzo ende kunye nokusebenza okuphezulu kunceda ukunciphisa iindleko zokomba.
I-PDC drill bit isetyenziselwa ukugrumba ioyile kakuhle, igesi kakuhle, amanzi kakuhle, njl njl Uyilo kunye nokuvelisa isuntswana le-PDC ngentsebenzo elungileyo kulwakhiwo ngalunye oluthambileyo, oluphakathi nolukhuni.
Umzimba wentsimbi onobunzima be-carbide yomphezulu we-tungsten (WC), yenza i-drill bit amandla aphezulu kunye nokuxhathisa kakhulu.
Uyilo lwe-torque ephantsi kunye nesoftware eyilelweyo yamazinyo ukunciphisa ukunxiba okusikiweyo kunye nokonyusa ubomi.
Uyilo lwenzululwazi olunamandla lokuyila ulungelelwaniso kunye noyilo lokulinganisa lwe-hydraulic lwenza ukuba inkqubo yokomba igudise ngakumbi.
Umzimba wentsimbi i-PDC Drill Bit ifumana i-ROP engcono kulwakhiwo oluthambileyo ukuya kwinqanaba eliphakathi kunye namandla asezantsi oxineneyo.
I-Matrix Body PDC Bi-iziko lokuqhuba i-Bit
I-Matrix Body PDC Bi-center Drill Bit yinto ekhethekileyo eyilelwe ngokukodwa ukubhola kwakhona. Inezinto eziluncedo zokubhola okuphezulu, ukusebenza ixesha elide, i-torque ephantsi kunye nokushukuma okuphantsi ngexesha lokomba.
Umzimba wentsimbi i-PDC Bi-center Drill Bit